Shacab iyo siyaasiin mug leh oo weli shaki badan ka qaba Kheyre - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Shacab iyo siyaasiin mug leh oo weli shaki badan ka qaba Kheyre
Shacab iyo siyaasiin mug leh oo weli shaki badan ka qaba Kheyre
Xildhibaano iyo Senataro ka tirsan labada Gole ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalane qeyb ka ah xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran oo ay kala hogaamiyaan Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, ayaa wali muujinaya walaac xoog leh oo ay ka qabaan musharax Xasan Cali Kheyre.
Warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa sheegaya in wali xubnaha xisbiyadaan dalbanayaan in Kheyre ooh adda musharax madaxweyne caddeeyo mowqifkiisa ku aadan saaxiibadiisa hore ee Viila Somalia.
Xubnahaan ayaa sheegay in Kheyre uu wali saaxiib la yahay Villa Somalia, gaar ahaan agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya, Fahad Yaasiin iyo Madaxweyne Farmaajo islamarkaana uu yahay dhagax lagu soo dhax tuuray mucaraadka.
Xildhibaanada qaarkood ayaa dalbaday in uusan ka mid noqon midowga musharaxiinta ilaa uu caddeeyo mowqifkiisa halka qaarkoodna ay dalbadeen in aad looga fiirsado.
Tuhunka ayaa sii xoogeystay kadib markii Kheyre khudbaddii uu jeediyey Jimcihii markii uu kusoo laabtay Muqdisho uu ka fogaado inuu si toos ah u dhaliilo madaxweyne Farmaajo ama Fahad Yaasiin.
Waxaa sidoo kale jirta in Kheyre ay diiwaanka ugu jirto inuu 2016-kii isaga oo ka mid ah xubnaha sare ee ololaha Xasan Sheekh, uu haddana si hoose ula shaqeynayey ololaha madaxweyne Farmaajo.
Xasan Cali Kheyre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka muacaaradka ah, inkastoo maanta ka soo muuqday shirka musharaxiinta, kadib markii uu ka gudbay shuruud lagu xiray oo ahayd inuu raali geliyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Previous articleMaxaa Villa SOMALIA uga qorsheysan shirka musharaxiinta e Muqdisho?
Next articleXasan Sheekh Oo Eedeyn Kulul U Jeediyay Taliye Fahad Yaasiin